Ishe vanozivisa kuti magumo uye tsaona ichauya | Apg29
Ishe vanozivisa kuti magumo uye tsaona ichauya
Muchitsauko 7 chaEzekieri, Ishe vanoporofita kunaEzekieri uye vanotaura nezvenguva yerima nedambudziko rinouya. Tsaona yakasarudzika zvachose, uye yega mune yayo mhando.
Ezekieri 7: 5 - zvanzi naIshe Jehovha, Tarira, njodzi inouya, irwo rudzi rwayo. Kuguma kuri kuuya, hongu, magumo ari kuuya! Inomuka uye inouya pamusoro pako. Tarira, iri kuuya!
Muchitsauko 7 chaEzekieri, Ishe vanoporofita kunaEzekieri uye vanotaura nezvenguva yerima nedambudziko rinouya. Tsaona yakasarudzika zvachose, uye yega mune yayo mhando. Anozivisa kuti nguva yekufa kwemunhu yapera, kuti zuva rasvika uye magumo ave pamakona mana enyika. Ishe vanotaura matambudziko anouya senge pfumo, dambudziko nedenda. Anotaura nezvenyika iyo kusava nesimba uye kusagadzikana zvinowanikwa, apo maoko evanhu anonyura nemabvi zvikaita semvura. Aya mazwi haangoshande kunguva yaEzekieri, asi mazwi echiporofita enguva yatiri kurarama uye yekufambira mairi.
FEMA yakawana simba
FEMA inomiririra Federal Emergency Management Agency uye mubatanidzwa wehurumende muUnited States unogariswa munjodzi huru uye / kana hondo. Kekutanga munhoroondo yeUS, nyika dzese makumi mashanu dzakasaina ziviso yenjodzi yemutungamiri wenyika kuti vari munjodzi. Izvi zvinoreva kuti iri musimboti yeAFA iyo yakatora zvimwe kana zvimwe zvikamu kana zvasvika pakuita sarudzo mukurwisa hutachiona hwe corona. Pakati pezvimwe zvinhu, zvirevo zvakaitirwa kuti IFMA itarise nekudzora kuti chii uye chii zvinhu zvasara munyika. Izvi zvinoreva kuti mune zviitiko zvakakosha, iyo yeUFA simba renjodzi inotora nzvimbo, uye nyika yacho zvobva zvashandurwa kuita mamiriro emapurisa.
Ini ndakambonyora zvekare nzira iyo United States inoita kunge iri kugadzirira njodzi huru munyika nekutanga "Fema Camps", ayo ari munharaunda yeUnited States, ayo mazhinji ano fanana nemisasa yevasungwa. Nhasi ivo havana chinhu, asi vakagadzirira kugamuchira mazana makumi ezviuru avanhu mune emergency kana mamiriro ekuda. Mubvunzo ndewkuti kana aya makambi munguva yemberi achashandiswa kuranga kana kuuraya vanhu munguva yeKutambudzika, avo vakasasarudza kutora mucherechedzo wechikara.
Kana taona maitiro ehurumende nehutungamiriri kuita, zvinongova zvekudzidzira zvekare pane izvo zvichazouya. Sezvo kufambira mberi kunoitika, isu tichaona kuti nyika dzinoshandurwa sei kuita mapurisa emunyika, uko kunoenderana mitemo ichaitika, kwaunowana mukana wekuranga vanhu vasinganamate kune aya anopesana neChristian mitemo uye matanho. Kutya kwakafanana kuripo muvanhu nhasi kuchave kwakakura kwazvo mukati mekutambudzika uye iwe uchave unoda kuita chero chinhu kuunza rugare. Vanhu chete vasingazokotamire ndevaya vanhu vanokundirwa Kristu munguva ino ine bhaisikopo - kwaunopa hupenyu hwako hwepasi pano, kuti vakunde vekudenga.
Jesu ari kuuya munguva pfupi!
Yese makumi mashanu nyika pasi pekuzivisa kwenjodzi kekutanga munhoroondo yeUS | TheHill